Myanmar Entrepreneur Group: စွန့်ဦးတည်ထွင် ၀ိုင်းတော်သားများသို့ ကျေးဇူးတင်လွှာ
စွန့်ဦးတည်ထွင် ၀ိုင်းတော်သားများသို့ ကျေးဇူးတင်လွှာ
၁၉၉၂ မှာ Rose Perot သမ္မတ ရွေးကောက်ပွဲဝင်တော့ ထပ်တလဲလဲ ပြောခဲ့တဲ့စကားလေးတစ် ခုရှိတယ်။ အားလုံးလဲ သိပြီးသားဖြစ်မယ်လို့ကျနော် ထင်ပါတယ်။ It's gonna be tough but it's gonna be fun. တဲ အခက်ခဲတွေရှိမှာပါ ဒါပေမယ့် ပျော်စရာလဲကောင်းမှာပါ လို့ဘဲဆိုပါတော့ ။
ကျနော်ဒီဘလောက်ကလေးကို စလုပ်ဖို့စိတ်ကူးခဲ့တဲ့အဆင့်တုန်းက ဆိုရင်ကျနော့် အနားက သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ တိုင် ပင်တော့အားလုံးက လက်မခံခဲ့ကြဘူး ဗျ။ ဘယ်တစ်ယောက်မှ ကျနော့်ဘက်မှာမရှိခဲ့ဘူးဆိုပါတော့ ။ ဒီလိုနဲ့ အွန်လိုင်းမှာ ဒီအကြောင်းအရာကိုစိုးထက်ကြီး နဲ့ပြောဖြစ်တဲ့ အခါကျမှာ လုပ်ပါ အားပေးတယ်ဆိုတဲ့ အသံလေး တစ် ခုကြားခဲ့ရတယ်ဆိုပါတော့။ ပြီးတော့ ကိုစိုးထက်ကြီး ကိုယ်တိုင်ဘဲ ဒီဘလောက်ကလေးကို တိုးတက်လာအောင် အင်တိုက် အားတိုက် ဒီကနေ့အထိကျိုးပမ်းပေးခဲ့တယ် ။ တကယ်လို့ကျနော်သာ တစ်ယောက်ထဲဆိုရင် ဒီလောက်မြန်မြန်ဆန်ဆန်နဲ့ အောင်မြင်လာနိုင်မှာမဟုတ်ဘူး ။ နောက်ပြီးကျနော် ဘလောက် နာမည်ရွေးတဲ့အခါကျတော Entrepreneur ဆိုတဲ့ စကားလုံးလေးကို ပါအောင်ရွေးချယ်ခဲ့တယ် ။ ဘာလို့လဲဆိုရင် ကျနော်က ဒီစကားလုံးရဲ့ မြန်မာပြန်လေးတစ်ခုကို အရမ်းသဘောကျလို့ပါ ။ စွန့်ဦးတီထွင် ဆိုတဲ့ မြန်မာပြန်လေးလေ ။ ကျနော့်အဘိဓာန်နဲ့ကျနော် အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ပြရမယ်ဆိုရင် စွန့်ဦးကို ကျနော်က ဦးစွားစွန့် လွှတ်ခြင်းလို့ အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်တယ် ။ ဒီတော့ဦးစွာစွန့်လွှတ်တည်ထွင်သူ (သို့) ဦးစွာစွန့်လွတ်ဖန်တီးသူများ ဆိုပါတော့ ။ တကယ်တော့ entrepreneur ဆိုတာတစ်စုံတစ်ခု အတွက် စတင်ပေးဆပ်သူတွေပါဘဲ ။ အောင်မြင်ချင်လဲ အောင်မြင်မယ် ။ ကျရှုံးချင်လဲ ကျရှုံးမယ်။ ဒါပေမယ့် သေချာတာက သူတို့မှာ အရှုံး သမားရဲ့ နှလုံးသားမရှိသူတွေဆိုတာတော့သေချာတယ် ။ ကျနော်တို့ ဒီ ဘလောက်ကလေး ဖြစ်လာတာ ဒီဘလောက် ကလေး မှာ ၀င်ရောက်ရေးသားကြတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်တွေ အတွေမြင်တွေဖလှယ်ပေးနေတဲ့သူတွေ ဟာလဲ တကယ့်ကို Entrepreneur စိတ် အပြည့်ရှိတဲ့သူတွေဆိုတာ ကျနော်ယုံကြည်ပါတယ်။ ကျနော်တို့ ဒီ MMEP Group ကြီး ဆက်လက်ရှင်သန်နိုင်ဖို့ဆိုတာဟာလဲ ကျနော့်လက်ထဲမှာရှိတာမဟုတ်သလို့ ဘယ်သူ့လက်ထဲမှာမှ တရားသေ ရှိနေတာမဟုတ်ပါဘူး ။ အားလုံးရဲ့လက်ထဲမှာ ရှိနေတာပါ ။ ဒီတော့ ဒီဘလောက်ကလေး ကနေ ကျနော်တို့ရဲ့ ရည်မှန်းချက်ဖြစ်တဲ့ ကမ္ဘာဆက်နွယ် လုပ်ငန်း အသွယ်သွယ်နဲ့ တွေ့ထိခွင့်ရဖို့ အတွက် ပြည်တွင်းမှာရှိတဲ့သူတွေ ကော ပြည်ပမှာရှိတဲ့လူတွေကော အားလုံး ဆက်နွယ်ပေါင်းဆက်ပါမှ အောင်မြင်မှာပါ ။ ကျနော်တို့တတွေဟာ မတူညီတဲ့ အတွေ့အကြုံ မတူညီတဲ့လုပ်ငန်းနယ်ပါယ်ဒေသ အသီးသီးက လူတွေဖြစ်ပေမယ့် ကျနော်တို့ရဲ့ တစ်ခု ထဲသော အိပ်မက်ဖြစ်တဲ့ ပြည်တွင်းကနေ ပြည်ပက လုပ်ငန်းတွေကို လုပ်ဆောင်နိုင်ဖို့ အကောင်ထည်ဖော်နိုင်ဖို့ ကို ၀ိုင်းဝန်းပြီး ဆက်လက်ကြိုးစားပေးကြပါလို့ မေတ္တာရပ်ခံသလို့ ဒီဘလောက်လေး မှာ ဦးစွားစွန့်လွတ်ပြီး အတွေးအမြင်တွေကိုမျှဝေပေးနေတဲ့ MMEP ၀ိုင်းတော်သားအားလုံးကို ကျနော့် အနေနဲ့ အထူးကျေးဇူးတင် ကြောင်းနဲ့ နောက်လဲ မလျှော့တဲ့ စိတ်နဲ့ ဆက်လက်ချီတက်ကြရအောင်လို့ စာလွှာလေးပါလိုက်ပါရစေ ။
နောက်ဆုံးကျနော်ပြောချင်တာလေးကတော့ It's gonna be tough but it's gonna be fun. အခက် ခဲတွေတွေ့မှာပါ ဒါပေမယ့် ပျော်စရာလဲ ကောင်းမှာ ပါ လို့ပြောကြားရင် အားလုံးရယ်ရယ်မောမောနဲ့ဘဲ MMEP Group လေးကို ဆက်လက်ရှင်သန်အောင် အခက်ခဲတွေကြားက ထိန်းသိမ်းကြပါစို့ လို့အားလုံးကို အကူညီတောင်းခံရင်း MMEP ၀ိုင်းတော်သားအားလုံးကို ကျေးဇူးတင်ပါကြောင်း ....
Posted by : KO WAI Posted @ 4:41 PM
စိုးထက် - Soe Htet ! August 12, 2008 at 5:07 PM
ဟဲ ဟဲ .. အဲ လောက် မလိုပါဘူး ... ကနေ့ အထိ ဆိုတော့ မနက် ဖြန် လျှော့ လိုက်တော့မယ် :P
KO WAI August 13, 2008 at 7:47 AM
အင် နက်ဖြန်အထိဗျာ ဟဲ ဟဲ